Ireo antontan-taratasy ilaina amin’ny fananganana koperativa
TERMES DE REFERENCE RECRUTEMENT DU DIRECTEUR GENERAL CMCS
Fizarana ny CVO sy Aro-vava Ambohidroa-Andranomena
Manomboka anio alatsinainy 27 aprily dia napetraky ny fitondram-panjakana ny tsy maintsy hanaovan’ny olona rehetra mivoaky ny tranony aro vava. Hanampiana ny vahoaka amin’izany dia nisy ny fizarana aro vava, … Read More
🔥 Tsinjo: Andravoahangy, Ampasapito
Raha ny teny amin’ireo tsena hita teny Andravoahangy sy Ampasapito kosa indray dia nahitana fihenam-bidy goavana ihany koa ny vary gasy manokana: manomboka amin’ny 1700ar ny kilao izany.
🔥 Tsinjo: Anosibe
Nanamarina ny vidin’ny entana teny amin’ny tsena Anosibe ny mpanara-mason’ny MICA ny 20 Aprily lasa teo. Nahitana fihenam-bidy goavana ny vary vokatra eto an-toerana ary efa miparitaka eny an-tsena izany. … Read More
EPP Andraisoro: Fizarana aro tava
Mitohy hatrany ny fizarana aro tava ataon’ny fanjakana ho an’ireo fianakaviana marefo. Teny amin’ny EPP Andraisoro indray no nanatanterahana izany. « Manao aro tava: miaro tena, miaro ny hafa. »
Tsinjo: Mahazo, Analakely, Andravoahangy, Mahamasina
Ho fanaraha-maso ireo vidin’entana izay tokony hifanaraka amin’ny faktiora hananan’ny mpaninjara dia nidina teny Mahazo, Analakely, Andravoahangy ary Mahamasina ny teto anivon’ny MICA. Nohamafisina araka izany tamin’ ireo mpivarotra ny … Read More
Fizarana aro vava miisa 2000
Fizarana aro vava miisa 2000 anio tetsy amin’ny Lycée Moderne Ampefiloha ho an’ireo fianakaviana marefo. Voahaja ny fepetra elanelana 1 metatra. Manentana hatrany ny MICA ny maha zava-dehibe ny hanaovana … Read More